Fomba fikonfesena tsotra - Fihirana Katolika Malagasy
Fomba fikonfesena tsotra
Daty : 21/12/2011
Dinihina tsara mialoha ny fahotana sy ny fahadisoana nahazo ny tena (mety ho mandritry ny andro vitsivitsy, na farafaharatsiny ahay, fotoana kely mialoha): tamin’ny hevitra, tamin’ny teny sy tamin’ny natao ary tamin’ireo adidy tsy vita.
Rehefa avy nandini-tena tsara sy nandinika kônsiansy dia atao samirery ny Fiampangatena:
«Miampaga tena amin’Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra aho, ary koa amintsika mianakavy, fa nanota tokoa tamin’ny hevitro, tamin’ny teniko, sy tamin’ny nataoko ary tamin’ny adidy tsy vitako: (sady mando-tratra) fahotako izany, fahotako, fahotako lehibe.
Koa mihanta amin’i Msina Maria Virijiny mandrakizay aho, amin’ny anjely sy ny Olomasina rehetra ary koa amintsika mianakavy mba hivavaka ho ahy amin’ny Tompo Andriamanitsika».
Avy eo dia manatona ny Mpampikônfesy, manao hoe:
Amin'ny Anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen
Tsofy rano aho Raiko fa nanota.
Ny Fiampangantena efa vitako teny am-pitoerana.
Dia lazaina eto ny fotoana nikônfesena farany… ka tohizana hoe: Nahazo ny famotsorana aho, ary nahavita ny asa fivalozana.
Tanisaina ny fahotana: Izao avy ny fahotako: …. Rehefa vita ny fitanisàna ny fahotana dia tohizana hoe: Izaho miampanga tena amin’izany fahotako izany sy izay rehetra tsy tsaroako.
Rehefa mangina ny Mpikofesy dia miteny ny Mpampikofesy, ka henoina tsara izay lazainy fa sady manoro hevitra izy no manome fananarana sy fampianarana ary manome hery ny Mpikofesy.
Dia omeny ny Asa fivalozana (vavaka na/sy asa fiantrana, na asa fivalozana hafa, izay hatao rehefa miala ny trano fikofesena).
Avy eo, asainy manao ny Ny Fanenenana ny Mpikofesy:
«Andriamanitra Tompoko, malahelo mafy amin’ny ratsy nataoko taminao aho, satria ianao tsara indrindra koa tokony ho tiana indrindra; ary ianao tsy tia ny ratsy, manampo fa tsy hanao ratsy aminao intsony aho, sy hanao asa fivalozana amin’ny fitahianao ahy».
na: «Tompo ô, mamindrà fò amiko fa mpanota aho!»
mandritra izany dia misy vavaka ataony, teneniny moramora izany, dia omeny ny Famotsorana ka hoy izy:
Ary izaho mamela ny fahotanao amin’ny anaran’ny ray sy ny Zanaka † sy ny fanahy Masina. Amena.
Faranany hoe: Mandehàna am-piadanana!
Valiana hoe: Hisaorana anie Andriamanitra!
Dia miala eo sady mandeha mamita ny Asa fivalozana, izay mety ho vavaka no ampanaoviny.
Vavaka samihafa, mety misy amin’ireto no hampanaoviny anao
Ry Fanahin’i Jesoa
Ry Fanahin’i Jesoa, hamasino aho;
ry vatan’i Jesoa, vonjeo aho;
ry ran’i Jesoa, hetsaho aho;
ry rano nivoaka tamin’ny lanivoan’i Jesoa, sasao aho;
ry fijalian’i Jesoa, herezo aho.
Ry Jesoa tsara fo, henoy aho,
afeno ao anatin’ny ferinao aho,
aza avela hisaraka aminao aho,
arovy amin’ny hasomparan’ny fahavaloko aho,
antsoy amin’ny andro hahafatesako aho,
ary asaovy mankany aminao aho,
hiaraka hankalaza Anao
amin’ny Olomasina mandrakizay. Amen.
Fivavahan’ny Tompontsika na Hataky ny Tompo
Tsarovinao, ry Maria Virijiny be famindrampo, fa tsy mbola re ny olona fa nafoinao, izay nanatona ny fiarovanao sy nihanta ny fanampianao ary nangataka ny fifonanao; matoky izany aho, dia midodododo manketo aminao, ry Reny Virijiny lohan’ny virijiny rehetra, manatona anao aho mpanota, aza malain-kihaino ny teniko ry Renin’ny Teny, fa raiso tsara izy ary ekeo. Amen.
Eokaristia : Fanompoana >
raherison15 - 21/01/2015 07:26
tena manampy tokoa ilay izy fa misaotra
ChefOdilon - 20/03/2015 13:26
Misaotra fa ampy hikonfesena ity.
www.fidel61 - 16/03/2019 18:45
mankasitraka fa tena manampy ny fikarohana vavaka hafa ilay izy